3 Tilmaamood oo loogu talagalay Suuqleyda si ay u sugaan Furahooda Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
3 Tilmaamood oo loogu talagalay Suuqleyda si ay u hubiyaan Furahooda Warbaahinta Bulshada
Axad, Abriil 30, 2017 Tuesday, May 2, 2017 Douglas Karr
Toddobaadkii ugu dambeeyay, waxaan isku dayeynay inaan u soo iibsanno lambarka sirta ah macmiilka Youtube koontada Ma jiraan wax ka sii daraya oo ku lumaya qof kasta waqtigiisa oo aan ahayn tan tan. Dhibaatadu waxay ahayd in shaqaale kaligiis maareeyay koontada si lama filaan ah uga tagay shirkadda - oo aan ku xirnayn shuruudaha ugu fiican. Waxaan ku dadaalnay sida dhexdhexaadiye ah inaan isku dayno inaan soo helno lambarka sirta ah, laakiin waxay yiraahdeen ma garanayaan waxa ay ahayd hadda.
Dabcan, Google waxtar uma leh weydiinta su'aalaha xaqiijinta sida bisha iyo sanadka aad furtay koontada, su'aasha qarsoodiga ah (ee qofka shaqaalaha ah ee meesha ka maqneyn) ka dibna wuxuu ku siinayaa inuu sameeyo dib u dejin fariin qoraal ah… khadka shirkadda ee ma heli karo
Uguyaraan waan ognahay in koontada ay amaan tahay oo aan laga marin. Xaaladda ugu xun ayaa noqon karta koonto la jabsaday oo aan macnaheedu ahayn in lagu soo celiyo gacanta astaanta. Aaminaaddu waa qaybta ugu muhiimsan ee macaamil kasta oo internetka laga sameeyo, marka aragtida sumadda oo la jabsado waxay yeelan kartaa saameyn baaxad leh. Kuma filna in mar dambe cudurdaar la siiyo - waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso sidii aad uga hortagi lahayd. Halkan waxaa ah 3 dariiqo oo aan kugula talineyno inaad ka fogaato inaad jabsato xisaabaadkaaga suuqgeynta:
Adeegso Xaqiijinta Mobilka - Hubinta mobilada ama 2-xaqiijin tallaabo ah waxay ku jirtaa gebi ahaanba goob kasta oo weyn oo bulsheed (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn). Asal ahaan, markaad ka soo gasho qalab cusub (ama mararka qaarkood qalab kasta), waxaa laguu soo diray lambar kale si aad ugu xaqiijiso farriin qoraal ama emayl. Si kale haddii loo dhigo, qof ayaa beddelaya ama jabsanaya eraygaaga sirta ah ee koontada bulshada, waxay sidoo kale u baahnaan doonaan marin u helitaanka taleefanka gacanta ee loo adeegsado ansaxinta. Waxaan u isticmaalaa meel kasta oo aan kari karo. Haddii aad haysatid dhowr qof oo isla xisaabtan isla aqoonsi ah, hadda waxaad leedahay qof dhexe oo sidoo kale la ogeysiiyey.
Adeegso Barnaamijyada Shirkad Saddexaad - Iska ilaali inaad u wada qaybiso eraygaaga sirta ah shaqaalaha ama hay'adaha gebi ahaanba adoo adeegsanaya codsi dhinac saddexaad ah si aad ugu daabacdo koontada. Waxaan jecel nahay Hootsuite. Sidan ayaan ugu dari karnaa ugana saari karnaa isticmaaleyaasha si fudud koontada, ama marin ugu helnaa koontada macmiilka, adigoon ogaanin lambarkooda furaha ama bixino kuweenna. Haddii ay si uun u jabsadaan koontadaada dhinac saddexaad, ugu yaraan ma awoodi karaan inay hi-jack ku galaan koontadaada aasaasiga ah ee bulshada! Waxaad sidoo kale si caadi ah ula socon kartaa soo galitaanka si sahlan qofka daabacay oo si fudud uga saarto koontadooda. Youtube dhab ahaantii wuxuu awood u leeyahay maareeyayaasha, sidoo kale Facebook wuxuu leeyahay ganacsi. Haddii shaqaale ama hay'ad ka tagto… kaliya ka saar liiska gelitaanka.
Adeegso Maareeyaha Furaha - Ka faa’iideysiga aalad lagu maareeyo furaha sirta ma ahan oo kaliya fududeynta gelitaanka, ee waa adeegsiga furaha sirta ah ee aadka u adag, furayaasha sirta ah ee adeeg walba leh iyo badalka mid kasta oo ka mid ah badiyaa Waxaan jecelnahay Dashlane oo si heer sare ah ugula taliya - waxay leeyihiin kumbuyuutar ay ku shaqeeyaan, barnaamij mobiil ah, iyo astaamo waaweyn. Xitaa way qiimeyn doonaan xulashada lambarkaaga sirta ah (ama mid baa kuu dooran doona). Waxaan si gaar ah u jecel nahay awoodda wadaagista lambarka sirta ee degellada leh marin xadidan. Isticmaaluhu wuu soo gali karaa isagoo adeegsanaya barxadda Dashlane laakiin ma awoodo inuu si dhab ah u arko lambarka sirta ah.
Luminta marin u lahaanshaha koontooyinkaaga warbaahinta bulshada ayaa ah wax laga xishoodo iyo madax xanuun aan loo baahnayn iyadoo aan loo eegin haddii lagu jabsaday ama shaqaale aad ka tagtay, ama shaqada lagaa joojiyay ama lagaa eryay. Waqtiga, dadaalka, iyo jahwareerka in la isku dayo in koontadaada dib gacanta loogu dhigo uma qalanto qatar in loo qeybiyo furaha sirta ah ee gudaha iyo dibada. Iska ilaali inaad ku fududaato adoo adeegsanaya maareeyayaasha sirta ah, xaqiijinta laba qodob, iyo awooda shirkadaha.
Tags: dashlanehootsuitefurayaashaammaankasirta warbaahinta bulshada
Ma u Baahan Tahay Shuruudaha iyo Xaaladaha, Asturnaanta iyo Xeerarka Kukiyada?
Miyaad Talo Xun Ka Heshaa Suuqleyda Hormuudka Ka Ah?